Hagbadu Waa Marka-yaggii ( Abdi-Shotaly)!
(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 12, 2019 10:25:29
Gacantii labaad ee isla hagba-daas doorosho xaq iyo xalaal ahi kama ay dhicin, ee af-duub iyo dhac baa uu ku maroorsaday askariga la yidhaaha
Isu-dhiidhiibka qori la ordka ee la yidhaaho maaratoon-ka ( Marathon Relay Race) ee dabka geliyey Somaliland, waa hagbadda Jeegaanta, ee hadba mid gacan la siiyo'e, baa imika lagu tallo jirey "Gacantii Saddexaad" ee orodkan in lagu qabto, garoonka ciyaaraha ee Magaalo Madaxdda Gobolka Awdal. sidas oo ay ahayd akhristaw, iyaka oo wacad ku dhigtay, in mar walba laga ilaaliyo, oo aany ciyaar-taas ka soo qayb gelin, beelaha aan jeegaanta ahayni, si aan cid kale loogu gacan gelin, bay imika dhibaato weyni ka taagan tahay cidii la siin lahaa. Aan in yar dib kugu celiyo siday wax u dhaceen, labadii jeer ee hore'e, dhega-haaga u raarici haddii aad ogayd
iyo hadii kale-ba. Markii ugu horeysay waxa lagu caleema saaray odayga Siilaanyo, shirkii Burco ee Xusbiga Kulmiye, taas oo laga-la soo cararay Hargaysa, si looga takhaluso C/raxmaan aw celi ( Laba-Tole), oo markaas u sharaxnaa Madax-weyne ku xigeenka, halkaana waxa si qarsoodi ah lagu keenay Saylici, oo ku soo baxay isu hoos gelintii iyo wixii ay ku sheega-yeen doorashadda. Gacantii labaad ee isla hagba-daas doorosho xaq iyo xalaal ahi kama ay dhicin, ee af-duub iyo dhac baa uu ku maroorsaday askariga la yidhaaha " Raggii ma adigaa ka hadhay", isaga oo xataa sugi kari waayey, inta uu dhamaysa-naayo Madax-weyne Siilaanyo wakhti-giisa, dhawr jeerna kaladhka qabsaday, oo yidhi ka soo deg, wixii ka dhacay-na aad la wadda socoteen, Nasiib daro, waa kii illaah caafimaad ha siiyo'e Xanuunsaday, ee markuu wadi kari waayey ka tanasulay, in uu mar labaad isi soo sharaxo, halkaasna uu askariga Fuq cir-u-taag, hadh cad uu kursiga fadhataystay. Waxay soo gurguura-taba, oo kolba ciiro isku qariso iyo dhooqo is mariso-ba, hadba geed foodda soo saarto-ba, imika baa rebshedi ka taagan tahay, oo shuruudii isku wareejintu khal-khal gashay, dagaal qarsoonina ay biyaha hoos-toodda ku legdamayaan, oo mid-ba-mid u dabaal joogtay-nayaa, ee iga hoo xaqiiqddii waa tane.
Koobka is reeb-reebka hagbadda jeenaata, waa hoog iyo baaba u soo hotday, ummadda reer Somaliland dal iyo dad-ba, ku kaste oo kofiyad ay u soo xidhaan-ba, waayo kuwii aynu hore u eednay, baa laguu soo macmalayaa, siddii qaadkii la odhan jirey " Cawsle la muuseeyey". Waxana ugu dambayn ku hirdamaaya, kuna soo baxay aakhirkii ( Final kick out-kii), saddex kooxood, oo mid cidla jafaayo, wax-bana aanu isla haynin, loona dhiibayn haduu indhaha dhiig kaeeno, kaas oo ah kii la yidhi " Ruuxaan lugo ku joogini, haduu laab la sare kaco, leeg-leegad weeyaan", aan kuu sii fasilo'e, waa la iskala tegay wixii lagu heshiiyey, oo hadda waxay maraysaa, kiina roonaw reerka u hadh, kaalay iga qaad iyo ma adaa ku dhaca? baa la isugu bootay-nayaa, ilaa hadana waa la isku mari la'yahay. Muwaadin waa kuwan kooxaha ciyaar-tani ay dhex mari doontaa, marka garoonka la isugu yimaado aakhirka bishan aynu ku jirn, sidda ay shaaciyeen weeyaane, hadaba qosol wuxu ka joogaa, qubanaha dambeeyee, ee ku soo dhawaw:-
(1) Kooxdda koowaad ee Jeegaantu, waxa taba-bare u ah ama hormood ka ah, oo la rabaa in uu koobka hagbadda u qaado kooxdiisa, waa iimaamkii hore ee Jano-ka-bood ( Waa Samaale'e), kaas oo uu hoosta ka wato, Dhaqaala-hana uu bixiyo askariga Guriggii Moorgan ku amar-ku-taaleeyaa, isaga oo laf-tiisu raba, marka hore in uu qaato laba gacmood oo isku xiga, kuwaas oo kala ah tan uu imika khasabka ku hayto iyo ta dambe ee soo socota, ka dib-na uu u maqaar saaro " Jano-ka Bood", oo aanay marna hagbadu ka wareegin kooxdda uu taageero ( waa ta Jano-ka-boode).
(2 Kooxdda labaad ee Jeegaantu, iyana waxay tahay, ta uu wato "Xaaji Musuq" ( Waa wasiirka beenta, eexdda, qabyaaladda, tuugani-madda, kala dhawaysiga, musuq-maasaqa, Xaaraanta, iska hor-keenka ummadda reer Somaliland iyo cuqdad ku kala beeris-toodda), waa ka ay ugu yeedhaan Maxamuud Xaashiye. Mudane Xirsi Xaaji Cali ( Hogaamiyaha Waddani), Intii uu madaxtoo-yadda joogay, may jirin meel qudha oo dalka laga iibiyey Ajaanib, laakiinse, markii maskani " Xaaji Musuq" ( madaxtooyo ku sheega ah), waa ka xaraashka dhigay Dekeddii, Garoonkii Berbera-na saldhig kaga iibiyey Imaaraadka Carabta. Ku soo noqo garoonka ciyaartu ka socoto, oo " Xaaji Musuq " isna ina leh, markan hagbadu waa xaafada-yadda, oo cid kale uma ogolin, ee askarigu dib hawgu soo noqdo, heshiiskii Jeegaanta ee aynu u wadda galay, in aynu ka ilaalino beelaha kale. waxa la yidhi labadda caydhinka ku qaybsadaa, bisaylka iskuma cawryaane, hadeer bay ka dhex taagan tahay seeftu, oo siddii beriggii hore ee Burco Qurba-siraadka loogu meheriyey Madax-weyne Siilaanyo, uu " Janao-ka-bood-na" doonayaa Boorame inuu isna Meherul-shardi gacanta ku qabsado. ee bal aan eegno cidda ku guulay-sata Kooba Hagbadda Jeegaanta iyo dagaal qarsoon ee ka dhex aloosan.
(3) Kooxdda sadexaad ee jeegaata u ciyaaraysaa, maaha mid filanaysa koobkan in ay iyadu qaadato, waayo siidhi-walayaasha ka garsooraha ah, baanay isku madax banaabayn. Sababta oo ah, Ninka la yidhaaho Ina Cabdi dheere, baa wuxu soo ciyaar-siinayaa Ina Waran-cade, oo beri hore sheegay in uu u sharaxan yahay "Xusbiga Qudhmiye", laakiin ah riyo iyo ruuxaan culus ku lahayn Xusbiga, misana iska jecal uun in uu tartamo, wax aan jirina iska dhaadhiciya, waxa la yidhi " Ilaahaw ninmaan wax-ba ogayn, ha cadaabine" ee inta cirku u jiro, baa Ina Waran-cade ay u jirtaa Gudoomiya-nimadda Xusbiga Qudhmiye. Wuxu weli isku maaweeli-nayaa khiyaaliggii uu ku baabi'iyey Xusbiggii Udub. Waxad ka mid tahay Xubnaha golaha dhexe baa loogu sheekeeyaa, oo been-toodda ay ugu sheegeen, mid kaste oo gola-haas ka mid ahi, wuxu xaq u leeyahay in la doorto, waxna uu doorto, waana isi soo sharaxi karaa. Laakiin waxa ka khaldan, in aanu marna-ba iman karin mawlaca, loona ogolayn, in ruux beeshiisa ka mid ahi uu gudoomiye ka noqon karo, ee ha ogaado in lagu guuraayo, wax-se loo haynin, talona ay isaga u taalo, ilayn wuu arkaa in uu gudcur cado moodaayo'e.
N.B Illaahaw Nimaan Wax-ba Ogayn Ha Cadaabin!